Manchester United oo xaqiijisay qalliinka uu Marcus Rashford mari doono & Xilliga uu garoommada kusoo laaban doono oo la baahiyay – Gool FM
Real Madrid oo guul soo laabasho ah ka soo gaartay kooxda Valencia oo ay ku booqatay garoonka Mestalla… +SAWIRRO
Kooxaha Juventus iyo AC Milan oo dhibcaha ku qeybsaday garoonka Allianz… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Juventus iyo AC Milan ee horyaalka Serie A oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Valencia iyo Real Madrid ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
Chelsea oo guul ay u qalantay ka soo heshay kooxda Tottenham oo ay booqatay… +SAWIRRO
Jesse Lingard oo guul ku hoggaamiyay Man United kaddib markii ay ka soo adkaadeen West Ham… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Tottenham iyo Chelsea ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha West Ham United iyo Manchester United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
RASMI: Liiska xiddigaha PSG ee caawa wajahaya Kooxda Lyon oo la shaaciyey… (Messi, Neymar & Mbappe oo…)
Manchester United oo weli xiiseynaysa inay xagaaga soo socda la soo wareegto Erling Haaland
Manchester United oo xaqiijisay qalliinka uu Marcus Rashford mari doono & Xilliga uu garoommada kusoo laaban doono oo la baahiyay
Ahmed Nur July 31, 2021
(Manchester) 31 Luulyo 2021. Naadiga Manchester United ayaa war qoraal ah oo ay soo dhigtay barta ay Internet-ka ku leedahay ku xaqiijiyay in xiddigeeda Marcuso Rashford uu mari doono qalliin looga sameynayo garabka si loo xaliyo dhaawac ka heysta.
“Kaddib wada tashi ay sameeyeen Marcus, macallinka, dhaqaatiirta caafimaadka kooxda iyo dhaqaatiirta qalliinka fulineysa, Marcus waxa qalliin looga sameyn doonaa garabka si loo xalliyo dhaawaca uu ka qabay” ayaa lagu yiri qoraal lasoo dhigay hillinka naadiga Red Devils.
Weeraryahanka xulka qaranka England ayaa 64 ciyaarood saftay xul iyo kooxba xilli ciyaareedkii hore ee 2020-21 inkastoo uu ku ciyaaray dhaawac uu ka qabo garabka taasoo hoos u dhigtay bandhiggiisa, waxaana haatan uu go’aansaday inuu qalliin ku sameeyo garabkiisa.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la filayaa inuu laacibkan garoommada kusoo laaban doono bisha October ee sanadkan taasoo la micno ah inuu Man United ka maqnaan doona kulammada ugu horreeya ee xilli ciyaareedka.
Sergio Aguero oo billaabay tababarka Barcelona... + (Sawirro & Farriintii ugu horreysay ee uu diray)
Wargeys kasoo baxa Spain oo shaaciyay qorshaha rasmiga ah ee ay Barcelona ka leedahay Griezmann iyo Coutinho inuusan ahayn in la iibiyo... (Maxay tahay sababta?)